KEDU ESI EMEGHE OGHERE NA MKPIRISI NA OTU CLICK? - WINDOWS - 2019
Kedu esi emeghe oghere na mkpirisi na otu click?
Enwere ajụjụ mara ezigbo mma n'oge na-adịbeghị anya. Aga m ekwu ya ebe a. Ya mere, ederede nke akwụkwọ ozi ahụ (pụta ìhè na -acha anụnụ anụnụ) ...
Ndewo M na-eji Windows XP arụ ọrụ arụ ọrụ na n'ime ya niile nchekwa meghere na otu click nke òké, yana njikọ ọ bụla na Intaneti. Ugbu a, m gbanwere OS na Windows 8 na nchekwa wee malite imeghe ya na pịa abụọ. Maka m, nke a dị oke nfe ... Gwa m otu esi eji otu igodo emeghe oghere. Daalụ n'ọdịnihu.
M ga-agbalịrị ịza ya n'ụzọ zuru oke dị ka o kwere mee.
N'ezie, na ndabara, nchekwa niile na Windows 7, 8, 10 na-emeghe site na ịpị abụọ. Iji gbanwee ọnọdụ a, ịkwesịrị ịhazi Explorer (M rịọ mgbaghara maka nkwado ahụ). M ga-ede n'okpuru ntụziaka mini-ntụziaka site na nzọụkwụ, dịka a na-eme na nsụgharị dị iche iche nke Windows.
1) Mepee onye nduzi. Na-emekarị, enwere njikọ na ala nke ọrụ ọrụ ahụ.
Open Open - Windows 7
2) Nke ọzọ, na akuku aka ekpe, pịa njikọ "Hazie" na nchịkọta nhọrọ na-emepe, họrọ njikọ "Nhọrọ nchekwa na nhọrọ" (dịka na nseta ihuenyo n'okpuru).
Nhọrọ nchekwa na nchekwa
3) Ọzọ, na window nke meghere, mepee ihe mmịfe ahụ gaa n'ọkwá "Mepee ya na otu ịpị, họta ndị na-arụ ọrụ." Mgbe ahụ anyị na-echekwa ntọala ma wepụ.
Mepee ya na otu click - Windows 7
Ugbu a, ọ bụrụ na ị gaa na nchekwa ma lelee katalọgụ ma ọ bụ ụzọ mkpirisi, ị ga-ahụ otú nchekwa a si ghọọ njikọ (dịka na ihe nchọgharị), ma ọ bụrụ na ị pịa ya ozugbo, ọ ga-emeghe ozugbo ...
Ihe merenụ: njikọ ahụ mgbe ị na-agbanye na folda ahụ, dịka njikọ na nchọgharị.
Windows 10 (8, 8.1 - otu)
1) Malite onye nyocha (ya bụ, na-ekwu okwu, mepee folda ọ bụla dị na disk ...).
2) E nwere panel n'elu, họta menu "ele", mgbe ahụ, "nhọrọ-> gbanwee nchekwa na nyocha ọchụchọ" (ma pịa bọtịnụ ntọala ozugbo). Ihe nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi n'ụzọ zuru ezu.
Mgbe nke ahụ, ị ​​ga-etinye "isi" na menu "igodo gọọmentị", dị ka e gosipụtara na nseta ihuenyo n'okpuru, i.e. họrọ nhọrọ "mepee na otu click, họrọ pointer."
Mepee folda na otu click / Windows 10
Mgbe nke ahụ gasịrị, chekwaa ntọala ma ị dị njikere ... A ga-emeghe folda gị niile na otu igodo bọtịnụ aka ekpe, na mgbe ị na-ekpuchi ha, ị ga-ahụ otu esi akọwapụta nchekwa ahụ, dịka ma ọ bụ njikọ na nchọgharị. N'aka otu aka ọ dị mfe, karịsịa ndị eji ya.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na eziokwu ahụ na Explorer na-agbadata site n'oge ruo n'oge: karịsịa mgbe ị na-abanye na nchekwa ọ bụla na ọtụtụ faịlụ, ana m akwado iji ọ bụla n'ime ndị isi faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere m mmasị ọchịagha niile - ọchịagha kachasị mma na onye na-anọchite anya onye nduzi.
Uru (ihe kachasị m mkpa):
ekwughị, ọ bụrụ na folda nke ọtụtụ puku faịlụ na-emeghe;
ikike ịhọrọ site na faịlụ faịlụ, ntinye faịlụ, ụdị, wdg. - iji gbanwee nhọrọ nhazi, pịa otu bọtịnụ mkpọtụ!
Ịgbasa na igbakọ faịlụ n'ime ọtụtụ akụkụ dị mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe faịlụ buru ibu na draịva abụọ (dịka ọmụmaatụ);
ikike imeghe ebe nchekwa dị ka nchekwa nkịtị - na otu pịa! N'ezie, ịchọta ihe dịnụ, na-enweghị ike ịmepụta usoro mgbasa ozi a ma ama: zip, rar, 7z, cab, gz, wdg;
ikike ịbanye na sava ftp na nbudata ozi sitere na ha. Na ọtụtụ, ọtụtụ ihe ọzọ ...
Ihuenyo site na Total Ọchịchị 8.51
N'echiche m dị umeala n'obi, onye ọchịagha niile bụ ezigbo nnọchi maka onye nyocha ọhụụ.
Na nke a, m na-alaghachi ogologo oge, agwụchala m, mmadụ niile na-enwe obi ụtọ!